ကျွမ်းကျင်သူတွေ ပြောပြလာတဲ့ သတိထားရမယ့် Omicron ရဲ့ - Hello Sayarwon
ကျွမ်းကျင်သူတွေ ပြောပြလာတဲ့ သတိထားရမယ့် Omicron ရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေ
လတ်တလော လူတိုင်း အာရုံစိုက် နားစွင့်နေမယ့် သတင်းက Omicron မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ပြီလား …… Omicron ရဲ့ ထူးခြား လက္ခဏာတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ……… ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားရင်ရော ကာကွယ်နိုင်မလား ……. booster ထပ်ထိုးဖို့ လိုမလား ……. ဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ပြောပြလာတဲ့ Omicron ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေ နဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးတာ၊ booster ထိုးတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တွေ့ရှိချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ Omicron
Covid-19 ရဲ့ မျိုးစိတ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Omicron မျိုးစိတ်က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် ပြန့်နှံ့ လာနေတယ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး သိရှိရတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၃၁ နိုင်ငံမှာ Omicron ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး (WHO) ကလည်း စိုးရိမ်နေပါတယ်။
လူတိုင်းလိုလိုမှာလည်း အသစ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Covid မျိုးစိတ် အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ မြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Omicron ရဲ့ လက္ခဏာတွေက ရှေ့ပိုင်းမှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကိုဗစ် မျိုးစိတ်တွေရဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ ကွာခြားမှု ရှိနေလားဆိုပြီးတော့လည်း စိုးရိမ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အလုံးစုံကို တိတိကျကျ မသိရသေးပေမယ့် ကမ္ဘာတလွှားက သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်း Omicron နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမို သိရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ လတ်တလောမှာ တွေ့ရှိထားတဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ပြောပြချက်တွေကို အတူတူ ဆက်ကြည့် လိုက်ရအောင်လား ……
Omicron ရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေများလဲ ……..
Omicron နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်တွေကို အများကြီး မသိရသေးပေမယ့် လေ့လာတွေ့ရှိရသလောက်တော့ Omicron မျိုးစိတ်က အရင်က တွေ့ရှိခဲ့ ကိုဗစ် မျိုးစိတ်တွေနဲ့ အနည်းငယ် ကွာခြားမှု ရှိပါတယ်။ လက္ခဏာတွေက သိပ်ပြီး ပြင်းထန်တာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။
Omicron က ကိုဗစ် မျိုးစိတ် အသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး လတ်တလောမှာလည်း ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိကာလအထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး စင်တာက စိစစ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေအရ Omicron ကူးစက်ခံရသူတွေမှာ အရင် ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တွေ ကူးစက်ခံရတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ မတူဘဲ အခုလို လက္ခဏာလေးတွေ ခံစားရပါတယ်။
သတိထားရမယ့် Omicron ရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေက
နှာစေးမယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ နှောင်းပိုင်းတုန်းက တောင်အာဖရိက နိုင်ငံတွေက Omicron မျိုးစိတ် ကူးစက်ခံရသူတွေမှာ လက္ခဏာတွေက ပြင်းထန်တာမျိုး မရှိဘဲ သာမန် နှာစေးဖျားနာမှုလိုမျိုး ခပ်ပျော့ပျော့ လက္ခဏာတွေကိုပဲ ခံစားရတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဗစ်မှာ အတွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေများလဲ ……
ရှေ့မှာ တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ ကိုဗစ် မျိုးစိတ်တွေတုန်းက အတွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
အသက်ရှူရတာ ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း ဖြစ်မယ်
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖြစ်မယ် စတာတွေပါ။
ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးသူတွေလည်း သတိထားရမယ့် Omicron
ကျွမ်းကျင်သူတွေ စိတ်ပူနေတဲ့ အချက်တစ်ရပ်က ဒီမျိုးစိတ်က လူငယ်တွေ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့သူတွေမှာလည်း အလွယ်တကူ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။
စဖြစ်စမှာ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဒီ မျိုးစိတ် ကူးစက်ခံရသူတွေထဲက ၇၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ကာကွယ်ဆေး (၂) ကြိမ်လုံး ပြည့်မီအောင် ထိုးထားပြီးသူတွေ ဖြစ်နေတာပါပဲ။
ဒီမျိုးစိတ်က လက္ခဏာ သိပ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုပေမယ့် ဒီလို မပြင်းထန်တာက ရောဂါအခံရှိသူတွေရော ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေမှာရော အတူတူပဲလားဆိုတာကို ကောက်ချက်ချဖို့ စောနေသေးတာပါ။
လက်ရှိကာလအထိ သိရသလောက်တော့ omicron ကူးစက်ခံရသူတွေမှာ အနံ့ပျောက်တာ၊ အရသာပျောက်တာမျိုး မတွေ့ရသေးပါဘူး။ လက္ခဏာတွေက သိပ်မပြင်းထန်ဘူး ဆိုပေမယ့်လည်း သူက covid ရဲ့ မျိုးစိတ် တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် အသက်ရှူရတာ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်တာ နဲ့ အခြားသော ကိုဗစ် လက္ခဏာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးဘဲ Omicron ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေမှာ အသက်ရှူရခက်တာလိုမျိုး လက္ခဏာတွေကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီမျိုးစိတ်က လက္ခဏာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မပြဘူးဆိုပေမယ့် သေချာလေး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ထိန်းရခက်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို မရောက်သွားဘူးလို့ တထစ်ချ ဆိုလို့ မရသေးပါဘူး။
Omicron ကို ကာကွယ်ဖို့ ကာကွယ်ဆေး ၂ ကြိမ်ပြည့်အောင် ထိုးပြီသူတွေမှာလည်း Booster ထပ်ထိုးတာမျိုး လုပ်ဖို့ လိုပါမယ်။
Omicronက ကူးစက်ခံရပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင် လက္ခဏာ ပြတတ်လဲ …….
အရင် ကိုဗစ် မျိုးစိတ်တွေတုန်းကတော့ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီး ၂ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ လက္ခဏာ ပြတာမျိုး ရှိသလို ကူးစက်ခံရပြီး ၄ ရက်ကနေ ၇ ရက်အတွင်းမှာ လက္ခဏာ ပြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
Omicron ကတော့ ကူးစက်မြန်တာကြောင့် အခြား ကိုဗစ် မျိုးစိတ်တွေထက် အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ လက္ခဏာ ပြနိုင်သလို လူတစ်ဦး ကနေ တစ်ဦးကို ကူးစက်နှုန်းကလည်း အခြား ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေထက် ပိုမြန်နေနိုင်ပါတယ်။
The Omicron COVID-19 Symptoms That Infectious Disease Experts Want You to Know About https://www.prevention.com/health/a38513208/omicron-variant-symptoms-covid-19/?source=nl&utm_source=nl_pnb&utm_medium=email&date=121421&utm_campaign=nl25970356&utm_term=AAA%20–%20High%20Minus%20Dormant%20and%2090%20Day%20Non%20Openers Accessed Date 15 December 2021
The latest on the Omicron coronavirus variant https://edition.cnn.com/world/live-news/omicron-covid-19-variant-12-03-21/h_9ff1e6557c051d5433283bb5645eba63 Accessed Date 15 December 2021
Omicron variant linked to much higher rate of Covid reinfection in South Africa https://www.ft.com/content/df3738ab-ea2b-438c-96ed-aa7eb75451a2 Accessed Date 15 December 2021
ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရဖူးသူတွေမှာ ကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုများတဲ့ Omicron မျိုးစိတ်
သားသားမီးမီးတွေကို Omicron ကနေ ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ ........
Omicron Variant ကူးစက်ခံရရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ ......